कोरोनाका कारण असुुरक्षित गर्भपतन बढ्दै - नेपाल घटना
प्रकाशित : २१ आश्विन २०७७, बुधबार ०७:०१
कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा भक्तपुरकी रुकु शर्मा (नाम परिवर्तन)को अनिच्छित गर्भ बस्यो । पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएका कारण समयमा उहाँले गर्भपतन हुन सकेन । एक जना स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन त गराउनुभयो तर औषधिसहित उहाँलाई २० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । त्यसको केही दिनपछि रक्तश्राव भयो । फेरि एक अस्पतलमा गएर उपचार गर्नुभयो ।
यस्तै कालीमाटीको एक निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराउन आउनुभएकी दुर्गा (नाम परिवर्तन)ले १० हजार रुपियाँ तिरेर गर्भपतन गराउनुभयो । तीन हजारको औषधि मात्र लाग्यो । केही दिनपछि रक्तश्राव तथा पेट दुखेर पुनः उक्त क्लिनिकमा आउँदा उनको गर्भपतन भएकै रहेनछ । फेरि पाँच हजार तिरेर गर्भपतन गराउनुप¥यो । अविवाहित दुर्गाको विवाह पूर्व केटा साथीसँंग असुरक्षित यौन सम्पर्क भएर गर्भ रहन गएको थियो ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छामा गर्भपतन गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो । प्रसूति गृहमा पनि विवाहपूर्व गर्भपतन गराउन आउने गरेको भन्दै उहाँले १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई सरकारले मान्यता दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सात हप्तासम्मको गर्भपतन तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गरेर गर्न सकिने बताउनुभयो ।
परिवार कल्याण महाशाखा मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधिबाहेक अन्य तरिकाबाट गरिएको गर्भपतन असुरक्षित हुने बताउनुहुुन्छ । उहाँले नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजार बढी गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँछन् । बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन् ।
देशभर हाल एक हजार पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ । डा. पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि करिब चार हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ ।
मान्यताप्राप्त यी स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म १३ लाख बढीले सेवा लिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१५ र १९ को बीचमा विश्वमा बर्सेनि सुरक्षित र असुरक्षित गरी सात करोड ३३ लाख गर्भपतन भएको छ ।
यस्तै असुरक्षित गर्भपतनका कारण विकासोन्मुख देशमा बर्सेनि सात लाख महिला अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब एक लाख महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा चार लाख ६६ हजार ७८१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गएको चार वर्षमा करिब एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यो सङ्ख्या कम छ । उक्त अवधिमा ८५ हजार ४९२ जनाले मात्र सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएका छन् ।
विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गरे १० हजार रुपियाँ जरिवाना र एक वर्षको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु तथा अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।